Wararka - Shuruudaha isticmaalka aaminka ah iyo keydinta aminoguanidine hydrochloride
Shuruudaha isticmaalka aaminka ah iyo keydinta aminoguanidine hydrochloride
Shuruudaha isticmaalka aaminka ah
U fiirso amniga markaad isticmaaleysid aminoguanidine hydrochloride, maxaa yeelay waa kiimiko sun ah. Haddii ay jirto dhibaato xagga nabadgelyada ah, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo khasaaro aan la qiyaasi karin. Kuwa soo socdaa waa shuruudaha isticmaalka aaminka ah.
1. Waa inaan shaqo fiican ka qabannaa ilaalinta nabadgelyada. Shaqaaluhu waa inay xirtaan qalabka difaaca si looga fogaado inay si toos ah ula xiriiraan kiimikada sunta ah.
2. Shaqo fiican ka samee ka hortagga baxsiga. Mar haddii daadku soo baxo, waxay u keeni doontaa khatar deegaanka ah iyo shaqaalaha.
3. Markaad isticmaasho ka dib, gacan gasho galoofyada soo gaadhay aminoguanidine hydrochloride.
Erey ahaan, isticmaalka aminoguanidine hydrochloride wuxuu leeyahay shuruudo adag lagamana shaqeyn karo si indho la'aan ah. Hawlgal sax ah ayaa xaqiijin kara amniga. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, la tasho soo saaraha kiimikada xirfadleyda ah.
Maaddaama ay tahay kiimiko sun ah, aminoguanidine hydrochloride waxay leedahay shuruudo deegaan oo sare oo loogu talagalay keydinta. Haddii aan si sax ah loo kaydin, way fududahay in saamayn lagu yeesho waxqabadka oo xitaa sababo shilalka amniga. Labada qodob ee soo socda waa in fiiro gaar ah loo yeesho inta lagu jiro keydinta.
1. Ku keydi meel qabow
Sababta oo ah aminoguanidine hydrochloride way qudhmi doontaa marka la kululeeyo, waana walax sun ah, waa inay saamayn ku yeelataa bay'ada ka dib marka ay kala daadato. Marka waa in la dhigaa meel qabow, si aysan u jiri doonin wax kuleyl ahaansho.
2. Si gooni gooni ah loo shaabadeeyey
Aminoguanidine hydrochloride waa in la buuxiyaa oo si gooni gooni ah loo shaabadeeyaa. Laguma kaydin karo kiimikooyin kale. Ka dib oo dhan, waa sun. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la dhigo calaamadaha digniinta badbaadada meelaha muuqda ee bakhaarka. Tani waa hab wax ku ool ah oo lagu hubinayo nabadgelyada.
Taxaddarrada keydinta aminoguanidine hydrochloride ayaa halkan lagu soo bandhigay. Markaad keydinaysid, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa, si loo hubiyo in waxqabadka uusan saameyn.